Ciidanka Booliska magaalada Garoowe oo howl galo ku qabtay 6 dhalinyaro ah
Garoowe:-Ciidanka Booliska magaalada Garoowe ayaa howl galo ay ka sameeyeen gudaha iyo daafaha magaalada waxaa ay gacanta ku soo dhigeen dhalinyaro waqtiyada habeenkii ah dhac ka geysta magaalada iyagoo dhaca Teleefanada baarashana u geystay dadka habeenkii waqti danbe socda.
Ciidanka Booliska magaalada Garoowe ayaa Xabsiga dhigay ilaa 6 dhalinyaro ah oo iyagoo falal amaan daro ah gacanta kula jira ka dib markii ciidanku ay xog ka helleen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Garoowe. Taliyaha saldhige dhexe ee magaalada Garoowe Aadan Muuse Jaamac oo u waramay saxaafada ayaa waxaa uu sheegay in ay jiraan howl galo ay ku qabteen dhalinyaro falal amaan daro ah kula jiray gacanta.
Taliyaha saldhige dhexe ee magaalada Garoowe Aadan Muuse Jaamac ayaa ugu baaqay in shacabka reer Garoowe ay la shaqeeyaan ciidanka amaanka si loo sugo amaanka loogana hortago dhalinyarada ku kacaya falal amaanka lid ku ah. Ugu danbayntii ayaa Taliyaha saldhige dhexe ee magaalada Garoowe Aadan Muuse Jaamac ayaa sheegay in amaanka magaalada Garoowe uu yahay mid sugan ciidamaduna ay wadaan howl galo ay ku baacsanayaan kooxaha nabadiidka ah ee doonaya in ay khalkhal ka abuuraan magaalada